Etu esi akwalite ihe omume na soshal midia dị ka dike! | Martech Zone
Thursday, July 28, 2016 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa na-aga n'ihu na-ahụ nsonaazụ dị mma na mgbasa ozi mmekọrịta maka iwulite mmata ụdị, ịkpụgharị ntụgharị, na iwulite mmekọrịta na atụmanya na ndị ahịa. Ekwetaghị m na otu ụlọ ọrụ na-abịa ịhụ nnukwu mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta ndị ahịa na-ahụ.
Mgbe ị nwere ike ịbanye n'ime mgbasa ozi mmekọrịta maka ịmatakwu ụlọ, ndị enyi na-ekerịta ihe omume ahụ na ndị enyi ndị ọzọ na-eme ka okporo ụzọ dị egwu. Na mgbe anyị nọ na mmemme ahụ, ịkọkọrịta ahụmịhe anyị na-enyere anyị aka ịdekọ ihe ncheta ndị ahụ, soro ha kerịta ya na ndị nwere echiche nke abụọ maka ịghara (oge a), ma gaa n'ihu na-eme ka anyị mata.
Facebook na - ewepụta nde 4 "masịrị" kwa nkeji ọ bụla, na Twitter na - etu ọnụ ihe dị ka nde 500 tweets kwa ụbọchị. ndị ọkachamara n'ihe omume, ndị nhazi, ndị ọkà okwu na ndị nwere ike ịbịa. Ọ dịghị ọkachamara ọ bụla nwere ihe omume kwesịrị ileghara nyiwe ndị a anya, dịka ike ha jidere enweghị ọnụ ahịa iji mepụta na ire ahịa ihe ịga nke ọma. Maximillion Omume Ndị Okike
Maximillion bipụtara ihe omuma a, Ndị dike na-elekọta mmadụ na-eweta Marketing Marketing iji nyere ndị na-ere ahịa aka iji ikike azụmaahịa nke mgbasa ozi mmekọrịta tupu, n'oge, na mgbe emume gị gasịrị. Ihe omuma ahu na-aga site na atumatu nke netwọkụ ọ bụla:
Etu esi akwalite ihe omume na Facebook - Mepụta ihe omume, jiri mgbasa ozi Facebook iji lelee ndị bịara mpaghara nwere mmasị, na-agba ọsọ asọmpi, na-agbaso onwe gị, ma tinye netwọkụ gị. M ga-agbakwunye na ọ dị mkpa ịkekọrịta ihe omume ahụ ma degharịa mmelite ndị bịara gị!
Etu esi akwalite ihe omume na Twitter - Mepụta hashtag pụrụ iche, nke dị mfe ma kparịta ya site na nkwekọrịta gị niile, jụọ ndị ọkà okwu ka ha na-akwado Twitter Chats, chọpụta ma weghachite mkparịta ụka na-arụ ọrụ n'oge ihe omume, mepụta ndepụta Twitter nke ndị na-akwado ha, ndị ọkà okwu na ndị bịara ya, wee wulite mmekọrịta n'oge niile.
Etu esi akwalite ihe omume na LinkedIn - Bipụta ọdịnaya bipụtara banyere ihe omume ahụ, nye mmelite oge niile na-eduga na ihe omume ahụ, jiri Direct Izi ozi iji kwalite ihe omume na netwọkụ gị, mepụta peeji ngosi, wee mepụta Otu Omume maka ịkparịta ụka na mkparịta ụka na-aga n'ihu.
Etu esi akwalite ihe omume na Pinterest - Mepụta ntuziaka ihe omume, kwalite ndị na-akwado gị, tinye mbadamba gị na weebụsaịtị gị, mepụta isiokwu na bọọdụ ọnọdụ maka ihe omume ahụ, ma soro ndị na-eso ụzọ nwee mmekọrịta.
Etu esi akwalite ihe omume na Instagram - Jiri ihe omume mmemme gị na mmelite ọ bụla, kesaa foto na vidiyo iji kwalite ihe omume ahụ, kwado asọmpi foto, jikọta ma kekọrịta na akaụntụ mmekọrịta gị ndị ọzọ, ma kwalite ndị na-akwado gị na ndị na-ekwu okwu.
Etu esi akwalite ihe omume na Snapchat - Jiri njirimara akụkọ ahụ, mepụta asọmpi selfie, wuo mmekọrịta mmekọrịta, zipụ ndị na-eso ụzọ gị ma soro ndị bịara mmemme gaa ozugbo.
Ọ na-atụ m n'anya mgbe niile na ọtụtụ ọtụtụ ihe na-enweghị ego iji mejuo mgbasa ozi mmekọrịta n'ihu, n'oge na mgbe ihe omume gasịrị. Ọ na-ewute gị nke ukwuu mgbe ihe omume gị na-eme mgbe niile! Nwere ike ịmepụta ụfọdụ ịrịba ọchịchọ na ike nkekọrịta ofụri ihe omume… na atụmanya ga-ejide aha maka ọzọ mgbe hụrụ ihe ha Agbaghara!
Ọ bụrụ na ihe a niile dị ka ụda ọrụ, kpọtụrụ ụfọdụ ndị ọrụ afọ ofufo! Interns na ụmụ akwụkwọ ndị ịtụnanya na-elekọta mmadụ media na mgbe na-adịghị enwe ego ịga ihe omume na ha ga-n'anya. Azụmahịa dị ukwuu na-enye nnweta n'efu yana uwe dị egwu nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ma hapụ ha ka ha daa na mgbasa ozi mmekọrịta!
Tags: mmemme ahiaFacebookinstagramLinkedInPinterestna-akwalite ihe na soshal midiasnapchatelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozinkwalite mmemme mgbasa oziTwitter